Malunga nathi-TAIZHOU HEYA PLASTIC MOLD CO., LTD
I-HEYA MOLD-ikhethekileyo kwi
Imveliso yoMngundo weplastiki
Sineqela lobungcali le-R & D, siya kuphuhlisa kwaye senze ukubumba kweplastiki kubathengi bethu ngokweemfuno zabo kunye neemfuno ezisekwe ngaphezulu kweminyaka eli-10 yamava okubumba.
Ukugxila kwinto yonke ekuqhubeni iinkcukacha zeplastikhi ekubunjweni ngomatshini kunye noomatshini bokuqhubekeka phambili kunye nezixhobo zokuhlola, ukubonelela ngomngundo ophezulu weplastikhi kubathengi.
Sijolise ekuphuhliseni iimveliso zeplastiki ezikumgangatho ophezulu kwiimarike zeshishini leplastiki kwihlabathi. Iimbumba zethu zePlastiki zihambelana nemigangatho yamazwe ngamazwe.
Ishishini eliphambili likaHeya ligxile ekwenzeni imveliso yokubumba yeplastiki enamava angaphezulu kweminyaka eli-10. Ezifana nokubumba kwekhaya, izixhobo zokubumba i-kitchenware, izixhobo zokubumba zekhaya, i-industry kunye ne-molds ye-injection molds, njl.
Ngobuchule bethu kunye nobuchule, ngokufanelekileyo ukwenza ulwenziwo olwenziwe ngokwezifiso kunye nesisombululo esisodwa sokumelana nokuhlangabezana neemfuno zomthengi yinjongo ye-Heya. ekulula ukusebenza nokugcina abathengi.
Sithatha indlela esezantsi kwiprojekthi nganye. Abaxhasi bethu bahlala bebona ukwanda kwetrafikhi, ukunyaniseka kokuthengisa uphawu kunye nezikhokelo ezitsha ngenxa yomsebenzi wethu.
1) Uyilo lweMveliso kunye noMngundo
I-Heya Mold iya kuphuhlisa kwaye iyile iimveliso kunye nokubumba ngokweemfuno zabathengi kunye neqela lethu le-R & D elinamava. Iya kunceda abathengi bethu abakwimveliso entsha, kwaye igcine iindleko zeeprojekthi ezintsha. Ngolwazi oluthe kratya, nceda unxibelelane nentengiso yethu ngalo naliphi na ixesha.
2) Uhlalutyo lomngundo
Heya Ikubumbe uya kwenza uhlalutyo ngumngundo-flow njengoko nganye izicelo loMthengi, kuthintelwe naziphi na iingxaki ngakumbi imveliso nokuvunda.
3) processing zomngundo
U-Heya Mold uya kuhlaziya kubathengi izixhobo zokubumba zeplastiki eziqhuba iingxelo ngeveki rhoqo. Kwimeko ethile, siya kuqhagamshelana nawe ngokukhawuleza.
I-Heya Mold ibonelela ngemizobo yokubumba epheleleyo kunye neenxalenye zomthengi ngaphambi kokuhambisa. Kwizinto ezisezantsi eziqhelekileyo, ungabhekisa kuluhlu lwethu kunye nokuthenga kwintengiso yakho.
5) Iifoto kunye neeVidiyo
I-Heya Mold iya kugcina zonke izinto zakho zokubumba ziqhuba iividiyo zonyaka omnye. Siza kukuthumela iifoto kunye neevidiyo zokuhlola okanye zokubhekisa ukusebenza komngundo.
6) Inkonzo kunye noNxibelelwano
I-Heya Mold iya kuhlala inxibelelana nawe kuyo yonke le nkqubo, ukusuka kunxibelelwano lobuchwephesha kwinqanaba lokuqala leprojekthi ukuya kulandelelo lwexesha lokwenyani ngexesha lesigaba semveliso yeprojekthi, ukuxhasa ubuchwephesha emva kokuthengisa .
INGXELO NGOKWENZAYO, Yijike ibe yeyokwenyani
Amava eR & D iqela lobungcali sisiqinisekiso somgangatho wemveliso yomthengi. Ukunyanzelisa ekuqhubekeni kwezinto ezintsha kungumthombo wophuhliso oluqhubekayo lweHEYA
Ukususela oko kwasekwa, imveliso yethu yanandipha igama eliphezulu kwimarike yamanye amazwe. Abathengi abakwiAsia, iYurophu, iAfrika kunye noMzantsi Melika ngaphezulu kwamazwe angama-30. Ezifana neRussia, iArgentina, iColumbia, iRomania, iBrazil, iMalaysia, iAlgeria kunye namanye amazwe.